Xildhibaan Mahad Salaad oo weerar afka ah ku qaaday Villa Somalia – Kalfadhi
Xildhibaan Mahad Salaad oo weerar afka ah ku qaaday Villa Somalia
Xildhibaan Mahad Salaad oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay Munaasabdda caleemo-saarka Madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo dabayaaqada bishaan ka dhacayso magaalada Garowe ee xarunta Maamulka Puntland. Qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ayuu ku sheegay in Munsaabadda caleema-saarka Madaxweyne Deni ay ka soo qeyb gali doonaan hogaamiyaal kala duwan oo ay ku jiraan Madaxdii hore iyo kuwa hada ayna jiri doonto kaftan badan Siyaasadeed culus.
Mahad Salaad ayaa yiri “Munaasabadda caleemo saarka Madaxweyne Deni waxaa lagu marti qaaday madax culus iyo siyaasiin ruug cadaa ah kaftan siyaasadeedna waa jiri doonaa ee markaan kaftanka Villa Soomaaliya waraaq miyaa laga aqrin doonaa”. Hadalkaan ayaa u muuqdo mid uu ku durayo Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubnaha ka agdhaw.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in Munaasabadda ay dhici doonto dabayaaqada bishaan waxaana lagu marti qaaday Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sidoo kale Munaasabadda ayaa lagu marti qaaday Madaxweynayaasha Jubbaland, Galmudug iyo hogaamiyaha Mucaaradka Cabduraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Dad badan ayaa u arka in halkaasi ay ka dhici doonto Khudbado u badan kaftan siyaasadeed iyo dacaayado. Xubnaha halkaas ku kulmaya ayaa in badan oo ka mid ah waxaa lagu tirayaa iney mucaarad ku yihiin Dowladda Soomaaliya waxaana dhacday in hore weeraro afka ah oo siyaasadda iyo maamulka quseeya ay isku qaadeyn.
Shacab badan ayaa dhowraya Munaasabada oo xiisa gaar ah wadata markii loo eego masuuliyiinta ka soo qeyb galayo. Sidoo kale waxaa jira Shaki muujinaya in ay baaqdaan Xubno muhiim u ah Xafladda sida Madaxweynaha Soomaaliya maadaama ay halkaasi isugu tagayaan siyaasiin aad uga soo horjeeda maamulkiisa. Ammaanka magaalada Garowe ayaa aad loo adkeyn doonaa sida ay sheegayso xogta aan ka helnay Garowe.
Xildhibaan katirsan Baarlamaanka Koonfur Galbeed oo xalay gurigiisa lagu weeraray